HomeDUNIDAYURUB33 FaransiiskaShaqaalaha Tareenka Waddanka Faransiiska ayaa shaqada uga tagaya dib-u-habeyn hawlgab
25 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 33 Faransiiska, YURUB, DUNIDA, tareenka, GUUD 0
shaqaalaha tareenka faransiiska ayaa joojiyay dibuhabaynta hawlgabka
Shaqaalaha tareenka ee Faransiiska ee ka soo horjeeday dib u habeynta ay dowladdu dooneeyso inay ku dhaqan geliso sharciga howlgabnimada ayaa ka tagay shaqooyinkoodii. Tallaabada shaqaalaha awgeed, carqalad ayaa ka dhacday adeegga tareenka.
Gudaha Faransiiska, shaqaalaha tareenka waxay ku dhufteen inay ka tanaasulaan dib u habeynta ay dowladdu ku talajirto inay ku yareyso, sida qiimo dhaca howlgabka, iyo ka laabashada tartiib tartiib ah ee da'da hawlgabka 62 illaa 64. Shaqaalaha ka tagay shaqada markay soo wacaan Ururka Shaqaalaha Guud (CGT) iyo South Ray Sud Rail Union, oo ay ka mid yihiin shaqaalaha tareenka ayaa xubno ka ah, waxay ka mudaaharaadeen dibuhabaynta hawlgabka ee dawladda ee Paris.
Mudaaharaadkii ka dhashey awgeed, qaar ka mid ah tareennada isku xira magaalooyinka iyo adeegyada tareenka dhulka hoostiisa laguma guuleysan karin. Adeegsiga aalado gaar ah oo loogu talagalay muwaadiniinta inay ku safraan iyadoo lagu dhawaaqayo shaqo joojinta ayaa horay u horseeday in xirida gawaarida.
Hawlgab lacageed oo ku yaal afka TÜDEMSAŞ shaqaale 03 / 05 / 2013 TÜDEMSAŞ malab hawlgabka shaqaalaha oo afka xaaladda Turkey Railway shaqaalaha tareenka la ansaxiyo sharciga on libaraaliyadda gaadiidka sidoo kale in ajandaha yimid. Baabuurka ayaa la cadaadiyay si loo yareeyo tirada shaqaalaha ka shaqeeya hay'adda TCDD, oo ku taala TÜDEMSAŞ, iyada oo loo marayo hawlgab. Sida ku cad Sharciga, oo lagu daabacay wargeyska rasmiga ah, kuwa xaqa u leh hawlgabka hawlgabka, laakiin waa inay ku sii jiri lahaayeen hawlgabka sababtoo ah da'da qaangaarka ah ayaa la siiyay gunno hawlgab. Qeybta 5 ee sharciga waa 5 ku meelgaar ah. Qodobka ee "TCDD iyo kuwii shuraakada la TÜVASAŞ TÜLOMSAŞ iyo lifaaqa ah oo xukuman Law No. 399 ka shaqeeya TÜDEMSAŞ (I) iyo (II) ...
Shaqaalaha tareenka ayaa shaqada ka tagay, iyaga oo aan ka warqabin dadka rakaabka ah ee ku soo noqonaya ilaaliyaha 23 / 05 / 2012 Wadaxaajoodyada wadaxaajoodka wadajirka ah, shaqaalaha rayidka ah ee ka socda ururada bulshada oo aan isku afgaran karin xukuumadda. Magaalada Adana, shaqaalaha tareenada ayaa bilaabay shaqo-joojintooda 00.00. Ururo kala duwan ayaa waxaa taageeray dafafiye Zurna Değiş waxayna taageertey shaqo joojinta. Muwaadiniinta aan ka warqabin weerarka ayaa ku soo laabtay qaybta. Gaadiidku wuxuu ku dhuftey sababo la xiriira weeraro. Marka tareenada lagu rido dameer ma guurto, mulkiilayaashu way dhibsadeen. Turkey Kamu-Sen ku xiran ee Turkish-Gaadiidka Sen Guddoomiyaha Laanta Cengiz Köse Adana, iyadoo la raacayo jadwalka ku xusan in gorgortanka shaqada uu sheegay in dhimashada shaqada bilaabay in 00.00. Köse, oo ku nuuxnuuxsaday go'aanka xukuumadda ee ah in uu ka qaybqaato wadaxaajoodka socodka nuska ah, isaga oo iska indha-tiraya sarkaalka iyo burburinta sicir-bararka, jel
Shaqaalaha TCDD Shaqaalahaan Ka Tagaan Roob! Sivas (Sawir Sawir) 16 / 04 / 2013 Shaqaalaha TCDD ayaa shaqada uga tagay roobka TCDD ee magaalada Sivas ka tagay shaqo maalin roobeed. Shaqaalaha TCDD ayaa saxaafadda u soo bandhigay saldhigga hore ee Saldhigga Tareenka ee Sivas si ay uga soo horjeestaan ​​sharciga ku saabsan xorreynta tareenada ee loo diro Golaha Guud ee Turkiga. Maanta Waxaan ku jirnaa hannaan sharci ah oo qeexaya qaddiyada iyo mustaqbalka tareennadeena taariikhda sanadlaha ah. Gaadiidku waa awoodda mootooyinka ee horumarinta iyo dhaqaalaha waddankan. Sababtan awgeed, 156 waxay ku salaysan tahay hadafka iyo aragtida taariikhda taariikheed ee taariikhda, khibradda iyo isku duubnaanta kaabayaasha dhaqanka ee le
Shaqaalaha Deutsche Bahn Shaqo u tag 18 / 03 / 2013 Weerarada keeni adeegyada tareenka qaar ka mid ah ayaa la baajiyay ee Germany, xadiidka ee ururka la Tareennada Jarmal (Deutsche Bahn) dhexdooda lagaaro oo ka mid ah heshiiska shuruudaha shaqada ka dhigay oo dhan dalka aroortii laba-saac shaqo joojin oo intaasu waxay ahayd wax ku ool ah. In saacadood subaxda u dhexeeya 06.00-.8.00 in shaqo-joojin ugu horeysay digniin qaban ay sabab u tahay Baraf gobollada dalka oo dhan, oo ay ku jiraan Bariga Germany ahaa gaadiidka curyaanka. Dhibaatadaas dartii, gaadiidka u dhexeeya magaalooyin badan ayaa istaagay, halka qaar ka mid ah dib-u-dhac ku yimid dhacdooyin muhiim ah. Tan iyo markii shaqaalaha ka shaqeeya tababarada dayactirka tareenadu waxay sidoo kale ka qayb qaataan shaqo joojinta digniinta, waa inay qaataan waqtiga ku xigta
TCDD shaqaale ku-meel-gaadh ah oo shaqo-joojin ah 11 / 06 / 2014 TCDD caasinimo hawlgabka shaqaalaha ku meel gaar ah, Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) Tan iyo 1975 140 sano ka shaqeeya sida shaqaalaha xilliyeed shaqaalaha Moosh ayaa ku dhawaa in aan awoodin inuu ciyaaraha ka fariisto. 60 sano ka dib markii uu ka fariistay, awoodin in ay shaqa shaqaalaha sugaya, dawladda ka codsaday shaqaalaha Tareenka State si ay u bixiyaan dhaw raaxadeeda waxa shaqaalaha xilliyeed. TCDD xnumx'inc wakiilada shaqaalaha gobolka Izzet Açıkbaş ', "ugu bilood 5 sanadkiiba ilaa sannaddii 2009, 3 bilood in ka dib markii aan ordo. Waxaan hadda meesha ka saaray ka hor inta uu ka fariistay," ayuu yiri. Opena "Kuwa lagu shaqaaleeyey sharciga ka dib markii howlgab ka dib, 6 shaqaaleysiiyay shaqada iyada oo aan ka tegin shaqada yasa
Maanta taariikhda: 25 September 1919 ku hareereysan Vezirhan
TCDD ilaa Kirada Sirkeci iyo Xardarpaşa Train Stations
Hawlgab lacageed oo ku yaal afka TÜDEMSAŞ shaqaale
Shaqaalaha tareenka ayaa shaqada ka tagay, iyaga oo aan ka warqabin dadka rakaabka ah ee ku soo noqonaya ilaaliyaha
TCDD shaqaale ku-meel-gaadh ah oo shaqo-joojin ah
Agaasimaha Guud ee Abe Pension waxay doonayaan inay u keenaan Mashruuca Tareenka Xawaarida Xawilaadda 90
Shaqaalaha Metro ee Faransiiska ayaa sidoo kale ka qayb qaatay shaqo joojinta
Shaqaalaha France Railways waxay kordhiyaan go'aanka shaqo joojinta